Dagaallo culus oo ka dhacay magaalada Beled Xaawo
BELED XAAWO —
Wararka ka imanaya magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in halkaasi ay xalay iyo saaka ka dheceen dagaallo culus.
Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay Beled Xaawo soo weerareen “jabhad fallaago” ah oo ay soo hubaysay dawladda Kenya.
Dawladda kenya ayaan markiiba ka jawaabin hadalka dawladda, hase yeeshee waxay dawladda Kenya horey u beenisay inay faragelin ku hayso Soomaaliya.
Mas’uuliyiin ka tirsan dhinaca maamulka Jubaland ayaa iyaguna dhinacooda sheegay inay ciidanka daraawiishta Jubaland lasoo weeraray, dagaalkiina uu sidaas ku qarxay kadibna ay ciidankii isla galeen magaalada Beled Xaawo.
Dagaalka ayaa saacadihii hore ee saaka si xooggan uga socday magaalada, waxaana uu sababay khasaare nafeed oo ay ku jiraan dad ka wada tirsan qoys oo ku dhintay weerarkaas, sida ay sheegtay dawladda Soomaaliya.
Wasiirka Warfaafinta dalwadda Soomaaliya ayaa goor dhowayd u sheegay warbaahinta inay ciidanka dawladdu jebiyeen “jabhaddii fallaagada” ee soo weerartay.
Dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibedda Kenya ayaa qoraal ay u dirtay guddoomiyaha Midowga Afrika ku sheegtay in “dagaalka uu u muuqdo inuu u dhaxeeyo ciidamada dowladda fedeeraalka Soomaalia iyo kuwa maamulka Jubaland.”
Kenya, oo aan qoraalkan uga jawaabin eedeynta dowladda Soomaaliya ee ah inay “soo hubeysay jabhad fallaago ah” ayaa ku baaqday in dagaalka deg deg loo joojiyo.